ရှာပုံတော် မင်းသား ကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ရှာပုံတော် မင်းသား ကြီး
ရှာပုံတော် မင်းသား ကြီး
Posted by Mahar Myanmar on Aug 10, 2013 in Arts & Humanities |9comments
အကျွန်ုပ် ပညာ ယှိသုခမိန် မဟာမြန်မာသည် မိမိ၏ ဖူးစာရှင် ကို ရှာဖွေမည် ဟူ၍ နေပြည်တော် မှ ဥတ္တရယဝမဇ္ဈ ဂုုံး ရွာ သို့ ထွက်လာပြီး.. ပထမဆုံးတွေ့ရှိသည့် အင်တာနက် ကဖေးဆိုင် သို့ ဝင်ပြီး သကာလ ကာပယ်ချီနို အီတလီ ကာဖီ တစ်ခွက်ဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ် ဖွင့်လျှက် ပထမဦးဆုံး တွေ့ရှိသူ ယာဂုအိုး ရွက်ထားသည့် သူငယ်မ ပလိုဖိုင် အား ချတ်ဘောက်စ် မှ ဟိုင်းဟု နှုတ်ဆက် လျှက် ဖူးစာရှင် ရှာပုံတော် ဖွင့်ခဲ့လေတော့သတည်း ။
၎င်းသူငယ်မသည်လည်း ရှေးအတိတ်ကံ ကြောင့် အကျွန်ုပ် အား ကံဟောင်း နှိုးဆော်ပြီး ဘာဘာ ညာညာ ဖြစ် ပြန်လည် ဟိုင်း ပါတော့သည် ။
အကျွန်ုပ် မဟာ မြန်မာ ပညာ ယှိ သည် ၎င်း သူငယ် မအား ပညာ ရှိ / မရှိ စူးစမ်း လို၍ လက်သီးဆုပ် ပုံအား မတ်စိ ပို့ လိုက် ရာ..တစ်ဖက် မှ.. လက်ဝါး ဖြန့် ပြ လျှက် မတ်စိ ပြန် လည် ရောက် ရှိလာသည် ဟူ၏။ ( အင်း..ဇာတ် အတိုင်းဆိုရင်..ဒါ က လက်ဆုပ် လက်ကိုင် မရှိဘူး ပြတာ ..လက်တွေ့ မှာ တော့.. ……… ……….. ………. ………. )
အကျွန်ုပ်လည်း တစ်ဆင့်တက် ၍ …
“ အသင်၏ အမည် အသူနည်း ”
“ အသင် အကျွန်ုပ် ၏ အမည်သည် လောက ၌ ဖြစ်ပြီး ၊ ဖြစ်ဆဲ ၊ ဖြစ်လတ္တံ့ သော ကာလ သုံးပါး ၌ မရှိ်သော အမည် ကို ဆိုလိုပါသည် ”
( အတွေး ) … ဘယ်ကာလ မှ မရှိ တာ သေမင်း မရဏ ဆိုတော့ကား
“ သိပါပြီ..နှမတော်.. မသေးမင်း .. နှမတော် ယာဂု အိုးရွက်တဲ့ ပလိုဖိုင် နဲ့ အဘယ် မှာ သွားလန်း မည် နည်း ”
“ ယာဂု အိုးအား အိမ်ရှေ့ နတ် ထံ ပို့ပါမည် ”
… အိမ်ရှေ့နတ် ဆိုတာ . ပထွေး ကို ပြောတာ..
“ မသေးမင်း သင် ၏ ပထွေးတော်သည် အဘယ် အမှု ကို လုပ်ဆောင်သနည်း ”
“ အသင်.. အကျွန်ုပ် ၏ ပထွေးသည် လူတစ်ယောက်တည်း ဖြင့် နှစ်ကွဲသော အမှု ကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေပါ သည် ”
… နှစ်ကွဲသော အမှု ဆိုတာ.. နှစ်ဘက် အမှုသည် နဲ့ ပတ်သက် နေရတာ က တရားသူကြီး ကို ပြောတာ..
“ အို ..နှမတော် သင့် ပထွေး တရားသူ ကြီး သည် အဘယ်မည်သော အရပ်ဌာနတွင် ရုံးထိုင်သနည်း”
“ အသင်. အကျွန်ုပ် ၏ ပထွေးသည် ထို အရပ် သို့ တစ်ခေါက် ရောက်သော သူတို့ တစ်ခေါက် မပြန်သော နေရာ တွင် ရုံးထိုင် ပါ ၏ ”
…တစ်ခေါက် ရောက်ပြီး သူတို့ တစ်ခေါက် မပြန်တာ က သေဒါဏ် ကျ ကြိုးတိုက် ရှိ တဲ့ အကျဉ်းထောင်
“ သင့် ပထွေးသည် အကျဉ်းထောင် နား က တရားရုံး တွင် ရုံးထိုင်သည် မဟုတ် လော ”
“ မှန် ပါ ၏..”
“ မသေးမင်း .. ယနေ့ သင် ပြန်လာ ဦး မည် လော..”
“ အသင် ၊ လာ လျှင် . အကျွန်ုပ် မလာရ ၊ မလာ လျှင် . အကျွန်ုပ် လာရပါ အံ့ ”
ငါလာ ရင် သူလာ စရာ မလိုဘူး မလာရင် .. သူလာ မယ် ဆိုတာ..ရဲ သား တွေ ကို ပြော တာ….
“ မသေးမင်း နှမ အသင် ၏ပထွေး သည် ရဲစခန်း တစ်ဘက် တွင် ရုံးထိုင် သလော ”
“ နှမတော် မသေးမင်း ..အသင် ၏ ပလိုဖိုင် နှင့် ဖေ့စ်ဘွတ် ကို အကျွန်ုပ် သုံးလိုသည် ပတ်စ်ဝပ် ပေး လမ်းညွှန် လော”
“ အရှင် ဤ လင့် အတိုင်း သွား လျှင် အကျွန်ုပ် ဂလုု ကိုရောက်မည်။ ဂလု အတွင်း ဝင်မိလျှင် နာမည် တောင်းလတ္တံ့.. တစ်ဖန် ဆက်သွား လျှင် ပတ်စ်ဝပ် တောင်းလတ္တံ့ ၊ အကြင် လက်ဖြင့် အကျွန်ုပ် ပေး၏ ၊ ထို ပေးသော လက်ဖြင့် မယူမူ၍ အကြင် လက်ဖြင့် အကျွန်ုပ် မပေး ။ ထို မပေးသော လက်ဖြင့် သာ ယူတော် မူ ပါ ဤ ဆို အပ်ခဲ့ပြီးသော ခရီးသည် အကျွန်ုပ် ကိုယ်ပိုင်တည်း ”
အိုကေ နှမတော်.. မောင်ကြီး အဲဒီ က စောင့်မည်
အင်း..သွားရင်း နဲ့ နာမည် တောင်း နေပြီ.. မသေးမင်း ရိုက်ထည့် ဦး မှ …ဟော ရောက်ပြီ..
ပတ်စ်ဝပ်.. ငါ့ လက် နဲ့ သူ ပေးမယ် မယူ နဲ့ တဲ့.. ငါ့ လက် နဲ့ သူ မပေးတာ ကို ယူပါ ဆိုတော့.. သူမ ပေးတာ က humanright ။ မပေးတာ က nationalism ဆိုတော့ ပတ်စ်ဝပ် က nationalism ရိုက်ထည့် ..ဟော ရပါပြီ ခင်ဗျား..
I can’t read other post and comment by Myanmar Language. Which font have you use ? Please reply to me and how can I solve.
Dear Mahar Myanmar,
We use Zawgyi Font .
You can download from Rt lower place of this page.
We can read your post well.
It isanice humor.
Zawgyi Myanmar font Installer for Windows XP, Vista, 7, 8 (32bit, 64bit) Free Download from the following link.
ညန်မာလို ဖတ်မရရင် …
ဇော်ဂျီကို ဒေါင်းပီး စက်ထဲ ထည့်ထားလိုက် …
အိုကေမှာ စိုပြေတွားမယ် ….
ကျွန်တော် လည်း ဇော်ဂျီ ဖောင့် သုံးပါတယ်..ခင်ဗျာ
အွန်လိုင်း က တင်ထား တဲ့ စာတွေ ခေါင်းစဉ် တွေ ကို ဖတ် မရပါ ခင်ဗျာ..
ကျွန်တော် အထင်.. လက်တော့ပ် မှာ တစ်ခုခု လိုနေတယ် ထင်ပါတယ်..
ဇော်ဂျိီ နဲ့ ဆေ့ဗ် လုပ် ပြီး ပိတ် ..တာ ကို နောက် ပြန်ဖွင့် လည်း ..အတုံး အတုံး တွေ ပဲ ပေါ် ပါတယ်…
အခုု လိုပြန် ပေးတာ ကျေးဇူး တင်ပါ တယ်..
နိုင်ငံ ရေးသရော်စာ သဘော ရေးရင် ကော ရ မရ သိချင်ပါ တယ်…
ခင်ဗျား ဂုလို မြန်မာလို ရေးဒါကျ ဖတ်လို့ ရဒယ်ပေါ့ ..
သူညားဒွေ ရေးထားတာကျ ဖတ်လို့ ရဝူးပေါ့ ..
ဒါဂျီးဂဒေါ့ ထူးဆန်းဒယ် …
ဘရောက်ဇာကြောင့် ဖြစ်မယ် …
Browser’s Settings ကို ကလိလိုက်ဘာ …
ပင်လယ်နှင့် တူသော ယောကျာ်းတစ်ယောက် says:
ခေတ်သစ်ကြင်ဖက်ရှာနည်းကို ခေတ်ဟောင်းစာပေအရေးအသားနဲ့ နားလည်အောင်ရေးနိုင်တာ တော်ရုံအစွမ်းမဟုတ်ပေဘူး။ :loll:
မ မ ကော..
ယာ ဂု အိုး ရွက် ထား သလား လို့..
လွှတ် ပေးလိုက် မယ်.. မဟော သဓါ လက်သစ်…
လက်သီး ဆုုပ် ပြရင် လက်ဝါးဖြန့် ပြီး တီး လွှတ် လိုက်..
မန်းလေး ဂေဇက် အတွက် ပြည်သူ အကျိုးပြူ သတင်း လေး တွေ ကျွန်တော့ ပတ်ဝန်းကျင် မှာ အများ ကြီး ရှိပါ တယ်..
ပို့ပေး နိုင်မယ် လို့ ထင်ပါတယ်…
လုပ်ထား တဲ့ အိုင်ဒီ ယာ ကောင်း ပါတယ်..ကုန်ကြမ်း မပြတ် ဘူး ပေါ့..